Rafitra mifehy ny rivotra sy ny karazana compresseur
Rafitra Air Compressed Ny rafitry ny rivotra voahitsakitsaka dia misy ilany famatsiana iray, izay misy ny compresseur sy ny fitsaboana ny rivotra, ary ny lafiny iray amin'ny fangatahana, izay misy ny rafitra fizarana sy fitehirizana ary ny fitaovana fampiasa farany. Ny lafiny famatsiana tantanana araka ny tokony ho izy dia hiteraka fahadiovana, ...
Maninona no mifidy Compressor Global-Air Air? Ny mpanjifa rehetra dia miahy ny teboka telo amin'ny vokatra dia ny vidiny, ny kalitao ary ny serivisy aorian'ny fivarotana. Raha ny vidiny, dia mamokatra vokatra afovoany avo lenta izahay, ary mampiasa singa avo lenta eny an-tsena, ka tsy mampitaha ny marika ambany amin'ny vidiny izay manana compressors ...
Fampiharana ny Air Compressed
Ny fotodrafitrasa indostrialy dia mampiasa rivotra voafehy ho an'ny asa maro. Saika ny indostrian'ny indostrialy dia manana compresseur roa farafaharatsiny, ary amin'ny zavamaniry antonony dia mety misy fampiasana an-jatony amin'ny rivotra voafehy. Ny fampiasana dia misy fitaovam-piadiana mahery vaika, fonosana ary fitaovana mandeha ho azy, ...